EMB-120 Mega Pak 1 sano 3 bilood ka hor #1386
Waan jeclahay diyaaraddaan! Kaliya hal shay oo yar laakiin waa jahwareer! Ma haysto "Suumanka kursi adag oo xaji" iyo "Sigaar Cabbid" ma dhawaaqo marka aan daminayo / damiyo. Wax kasta oo kale waxay u muuqdaan inay si sax ah u rakiban yihiin. Wixii talo soo jeedin ah waa laga mahadcelin doonaa. Mahadsanid!